नार्कोनन सफलताको भिडियो - जोन डब्ल्यु.
⨯ English Dansk Deutsch Ελληνικά (Greek) Español Français Hebrew Magyar Italiano 日本語 (Japanese) Nederlands Norsk Portuguès Русский (Russian) Svenska 繁體中文 (Chinese) Nepali Arabic Ukrainian Czech Turkish सबै क्षेत्र /भाषा
फोन गर्नुहोस् (877) 508-8151
म हुर्केको शहर मादकपदार्थ निषेधित थियो। त्यहाँ मादकपदार्थ किन्न पाइँदैनथ्यो। म कलेज गएर समूहमा आवद्ध भई मादकपदार्थ सेवन गर्न थाले। ‍त्यो बेला सबैले त्यसै गर्थे।
त्यसपछि म ल कलेजमा भर्ना भए। त्यहाँ पनि पिउने बानी गएन। तर यो मेरा लागि समाजबाट छुट्टयाउने कारण बन्न थाल्यो।
कलेज सकेपछि मैले कामको खोजी गरे र काम गर्न पनि थाले।
हरेक रात म ह्विस्की वा स्कच पिउँथे।
म काममा जानुपर्ने हुनाले मादकपदार्थ पिएको कुरा लुकाएर भद्र देखिने प्रयास गर्थे।
मेरो शरीरमा रहेको अवसादक लागुपदार्थको विषालु मिश्रण र मादकपदार्थले मेरो दिमाग ध्वस्त पार्दै थियो।
यसै क्रममा आमाले भन्नुभयो, “तिम्रा लागि उपयुक्त ठाउँ फेलापारेका छौं।”
त्यो नार्कोनन थियो।
यसले मलाईं अँध्यारो ठाउँबाट उज्यालोमा ल्यायो। आफू फेरि पहिले जस्तै हुनु, जीवनमै आश्चर्यजनक थियो।
हरेक दिन असल काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त गरे। तपाईंलाई थाहा छ, अब म पहिला जस्तो थिएन।
मसँग लक्ष्य छ, लगन छ।
मैले नार्कोननकै कारण अर्थपूर्ण, संलग्नात्मक र सिर्जनशील जीवन पाएको छुँ।
English Dansk Deutsch Ελληνικά (Greek) Español Français Hebrew Magyar Italiano 日本語 (Japanese) Nederlands Norsk Portuguès Русский (Russian) Svenska 繁體中文 (Chinese) Nepali Arabic Ukrainian Czech Turkish सबै क्षेत्र /भाषा
© 2019 नार्कोनन एरोहेड . सर्वाधिकार सुरक्षित। • अनलाईन गोपनीयता सूचना • प्रयोग सर्तहरू • गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना • अस्वीकृति: व्यक्तिगत परिणामहरूको कुनै गारन्टी गरिएको छैन र यो व्यक्ति अनुसार भिन्न हुन सक्छ।